होसीयार ! लिपिस्टिकको दैनिक प्रयोगले निम्त्याउँछ यस्ताे समस्या
होसीयार ! लिपिस्टिकको दैनिक प्रयोगले निम्त्याउँछ यस्ताे समस्या मेक अपमा पनि लिपस्टिकको भूमिका महत्वपुर्ण नै हुन्छ।
अस्मिता उप्रेती आइतबार, माघ १९, २०७६
काठमाडौं – महिलाहरुको लागि श्रृंगार अनिवार्य हो। आफ्नो सौन्दर्यलाई बढि चनाखो राख्नाले उनीहरु श्रृंगारपटारमा बिशेष ध्यान दिने गर्दछन्। सुन्दरी हुनु महिलाका लागि बिशेष गुण पनि हो। बिहान उठे पछि प्रायः महिलाहरु आफ्नो श्रृंगारपटारमा नै समय बिताउने गर्दछन्।
महिलाहरु मेक अप गर्छन्, मेक अपमा पनि लिपस्टिकको भूमिका महत्वपुर्ण नै हुन्छ। तर आफूले लाउने लिपिस्टिकले स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने बारेमा उनीहरुलाई ख्यालै हुदैन्। एक सर्बेका अनुसार लिपिस्टिक प्रयोग गर्ने महिलाको दिमागी सक्रियता नै कमजोर हुँदै गएको फेला परेको थियो। लिपिस्टिकमा एक किसिमको सीसा प्रयोग हुन्छ।
जुन मानव स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले उच्च हानिकारक हुन्छ। नेपालमा पनि केही समय अघि सरकारले सौन्दर्य सामग्रीमाथी हुने रसायनको प्रयोगबारे परीक्षण गरेको थियो, भने चिकित्सकहरुका अनुसार सीसा मानवीय स्वास्थ्यका लागि धेरै हानिकारक हुन्छ। मानवीय स्वास्थ्यमा नियमित सम्पर्कमा रहेका कारण क्यान्सर तथा दिमागी असरको जोखिम हुने विशेषज्ञहरुले जनाएका छन्।
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १९, २०७६ १५:४७
मंगलबार, कात्तिक २, २०७८ २०:४९ नेपाललाई थप २० लाख मात्रा खोप अनुदान दिने चीनको घोषणा
शुक्रबार, असोज २९, २०७८ १७:१० देशभर थप २७२ जनामा कोरोना पुष्टि, ७७७ डिस्चार्ज
बिहीबार, असोज २८, २०७८ १८:०२ देशभर थप ४५५ जनामा कोरोना संक्रमण, ८ जनाको मृत्यु
आइतबार, असोज २४, २०७८ १३:५८ नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण ६० प्रतिशतले घट्यो
शनिबार, असोज २३, २०७८ २०:२४ जुम्लामा ४६ हजारभन्दा बढीले लगाए कोरोनाविरुद्धको खोप
नेपाल इण्डोसियासँग २–० ले पराजित
सिके राउतका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप
प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग लगाउन संसदलाई आह्वान
मधेशका किसान रुदैं, कृषिमन्त्री यादव भने गायब
उपेन्द्र यादवको पार्टी कार्यालय खालि गराउन उजुरी, ४३ महिनाको भाडा असुल गरिदिन समेत माग
एमालेको १०औँ महाधिवेशन चितवनमा हुने